Barkhad Cabdi - Wikipedia
Barkhad Cabdi (Af carabi: برخد عبدي; dhashay 10 Aprial 1985), waxa uu ku dhashay Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, waa atoore ka qeyb qaatay Filimkii Captain Phillips ee soo baxay 2013 dii, waxaana uu ku guuleystay abaalmarino badan oo ay ka mid yihiin Best Actor in a Supporting Role at the Academy Awards iyo BAFTA. Abdi ayaa markii ugu horeysay sameeyay filimkiisii ​​2013-kii Captain Phillips. Wuxuu ciyaaray markabka afduubka iyo hoggaamiyaha budhcad-badeedka Abduwali Muuse.   Waxaa la tuuray ka dib raadinta adduunka oo dhan kaalinta hogaanka ah. Cabdi iyo saddex kale oo ka mid ah jilayaasha kale ayaa markii dambe loo doortay in ka badan 700 oo ka mid ah wicitaankii 2011 ee Minneapolis. Sida laga soo xigtay Agaasimaha Ganacsiga, afarta xul ayaa loo doortay sababtoo ah waxay ahaayeen "kuwa la doortay, oo ah kooxdii la subkay oo soo xaday."  Waxa la siiyay kaliya $ 65,000 muuqaalkiisa muuqaalka filimka wuxuuna dib ugu soo laabtay dukaanka walaalkiis ka dib. 
(Carabi) برخد عبدي
Barkhad Cabdi ee New York Film Festival ee 2014.
(1985-04-10) Abriil 10, 1985 ( 35jir)
Hawshiisa, Cabdi waxaa loo magacaabay Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Wanaagsan, Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Wanaagsan iyo Abaalmarinta Abaalmarinta Dahabka ah. Wuxuu ku guuleystay abaalmarinta BAFTA ee loogu talagalay Actarka Taageerada Wanaagsan  Khibradda Cabdi ee Captain Phillips wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee warshadda filimka.  Waxa la siiyay $ 65,000 doorkiisa filimka.  Ka dib markii la soo gabagabeeyay, ayuu ku soo noqday inuu ka shaqeeyo dukaanka walaalkiis. 
Bishii Janaayo 2014, Abdi wuxuu akhriyay qoraallada telefishanka.  Waxa uu door ka ciyaaray dhacdadii koobaad ee Hawaii Five-0, isagoo ciyaaray dagaalyahankii hore ee Roko Makoni.  Sannad ka dib, wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo filimada majaajilada ee Trainwreck, inkastoo uusan muuqan filimka la dhammeeyey.  Waxa kale oo uu ka muuqday sawirada "Eye in the Sky 2015", isagoo ciyaaraya Jama Faarax; oo wuxuu ka soo muuqday Brothers Grimsby.  Sannadkii 2016-ka Cabdi Cabdi wuxuu ciyaaray doorka hogaanka ah ee A Stray, oo ah filim madaxbannaan oo uu hogaamiyo Musa Syeed oo lagu aasaasay bulshada Soomaalida Minneapolis. 
Cabdi wuxuu ka noqday doorka Captain Phillips ee filimka 2017-ka, Burcad-badeedda Soomaaliya, oo ciyaaraya wakiilka maxaliga ah ee dawladda iyo turjumaanka dowladda Soomaaliya ee Jay Bahadur. Cabdi wuxuu isku-duwaha wareysiyada u dhaxeeya hoggaamiyeyaasha burcad-badeedda iyo Bahadur, kuwaas oo diiwaan-galinaya dhiirigelinta budhcad-badeednimada ee Soomaaliya toddobaadyadii ugu dambeeyay ee lagu sii daayay Merseyside Alabama. 
Bishii Oktoobar 2017, Abdi wuxuu ku ciyaaray Denis Villeneuve's Blade Runner 2049, doorka yar ee aqoonyahanka. Waxa uu hal goob kula wadaagay Ryan Gosling, isaga oo siinaya macluumaad ku saabsan halka uu tagayo. 
Cabdi wuxuu amar ku siiyay filim, Ciyaala Xashi, iyo sidoo kale dhowr fiidiyoow oo muusikada ah 
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Barkhad Cabdi.
Barkhad Cabdi - Internet Movie Database
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Barkhad_Cabdi&oldid=179194"
Last edited on 30 Agoosto 2018, at 14:45
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 30 Agoosto 2018, marka ee eheed 14:45.